Sidee ayay u muuqan karaysaa SHAXDA ay Kooxda Barcelona kala hortagayso habeen dambe Naadiga Atletico Madrid?? – Gool FM
Man United oo saddexda dhibcood ka soo qaadatay kooxda Tottenham oo ay booqatay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Sheffield United iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Tottenham Hotspur iyo Manchester United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Xiddig u ciyaara PSG oo kooxdiisa ka caawin kara inay lasoo saxiixato Cristiano Ronaldo
Mino Raiola oo shardi adag hor dhigaya kooxaha doonaya Erling Haaland… (Hal milyan & hal asbuuc)
Barcelona oo ka war heshay xiisaha Liverpool ay u qabto mid ka mid ah xiddigaheeda iyo kooxda reer Spain oo…
Laba xiddig oo muhiim u safka Arsenal oo seegaya ciyaarta caawa
Man United, Arsenal, Juventus, Inter Milan, Atletico Madrid iyo guud ahaan kulammada galabta illaa caawa laga ciyaari doono horyaallada waaweyn ee qaaradda Yurub
Horudhac: Tottenham Hotspur vs Man United… (Jose Mourinho oo rikoor wanaagsan ka heysta Red Devils, sidoo kalena doonaya inuu mid cusub u dhigo)
Real Madrid oo hoggaanka u qabatay horyaalka La Liga kaddib markii ay garoonkeeda Alfredo Di Stefano ku garaacday Barcelona… +SAWIRRO
Sidee ayay u muuqan karaysaa SHAXDA ay Kooxda Barcelona kala hortagayso habeen dambe Naadiga Atletico Madrid??
Haaruun June 29, 2020
(Barcelona) 28 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa inay waddada guulaha dib ugu soo laabato, marka ay kulan ka tirsan horyaalka La Liga garoonkeeda Camp Nou ku soo dhoweynayso habeen dambe Naadiga Atletico Madrid.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ayaa barbaro soo gashay labo ka mid ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey, iyadoo kulankii la soo dhaafayna barbaro 2-2 la soo gashay Celta Vigo Sabtidii.
Barcelona ayaa hadda ku jirta kaalinta labaad ee horreynta horyaalka La Liga, markii xalay Real Madrid guul ka soo gaartay Espanyol oo ay booqatay, waxaana Barca hoggaanka horyaalka loogala wareegay labo dhibcood.
Haddaba Shabakadda Sports Mole ayaa SHAX ka sameysay sida ay u muuqan karto safka Catalan ay kala hortagayso Atletico, kuwaasoo guuleystay afartoodii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga.
Barca waxaa kulankan ka maqnaan doona Frenkie de Jong oo kubka ka dhaawacan iyo Ousmane Dembele oo dhaawac muruqa ah la maqan, waxaana sidoo kale shaki laga gelinayaa kulankan Sergi Roberto oo feeraha xanuun ka sheeganaya.
Halkaan hoose ka eeg sida ay u muuqan karto shaxda Barcelona ay ku wajahayso Atletico Madrid habeen dambe:-
Real Madrid oo guul ka soo heshay kooxda Espanyol oo ay booqatay… +SAWIRRO
Xiddiga Real Madrid ee Casemiro oo iska diiday in loo nisbeeyo goolkii uu xalay ka dhaliyey Kooxda Espanyol